Vaovao - fitandremana amin'ny fampiasana sy fikojakojana ny alumina fotsy mifangaro
Fitandremana amin'ny fampiasana sy fikojakojana ny alumina fotsy mifangaro
Ny karazana abrasive corundum mahazatra indrindra ao amin'ny indostrian'ny abrasive dia fotsy alumina mifangaro. Izy io dia tsy azo ampiasaina amin'ny fizotran'ny indostria. Mando ny toetr'andro tato ho ato. Ahoana no fomba handraisantsika fepetra tsy misy rano sy fikojakojana ny fotsyalumina mifangaro? Ity manaraka ity dia fanazavana famintinana manokana:
1. Fampisehoana tsara: White fused alumina dia azo ampiasaina amin'ny famolahana sy ny fikosoham-bary, ny vy tsy matevina, ny vy haingam-pandeha ary ny metaly hafa; ary azo ampiasaina amin'ny sandblasting, famokarana kodiarana, sns; Izy io koa dia be mpampiasa amin'ny seramika isan-karazany toy ny fanariana faran'izay marina, famerenan'ny vy, fihenan-tsakafo simika, porselana elektrika 95, porselana haingon-trano sy porselana ho an'ny fiainana isan'andro; ary koa ny indostria avo lenta toy ny indostrian'ny miaramila sy ny fitaovana elektronika. Ny hamafin'ny alumina mifangaro fotsy dia somary avo kokoa noho ny corundum volontsôkôlà. Izy io dia manana hasiana somary ambany kokoa, fahadiovana avo, fanamafisana ny tena, fahaizan'ny fikosoham-bary mahery, famokarana hafanana ambany, fahombiazana avo lenta, fanoherana ny harafesina asidra sy alkaly, fanoherana ny hafanana avo, ary fitoniana hafanana tsara.
2. Fanasitranana tsy tantera-drano: White alumina mifangaro abrasives, ao anatin'izany ny fotsy alumina mifangaro vovoka, fotsy alumina mifangaro fasika, sns., dia vita tamin'ny alàlan'ny fandorana hafanana avo lenta, izay manana fahamboniana lehibe raha oharina amin'ireo vokatra marokoroko hafa. Mila tantera-drano sy hamandoana izy mandritra ny fampiasana azy, fitehirizana sy fikojakojana isan'andro. Mba hahafahantsika mampiasa azy io tsara kokoa.
3. Azo sorohina: ny mpiaro miaro dia manome fiarovana feno ny fotsy alumina mifangaro ho an'ny toetra samihafa, toy ny fidirana amin'ny hamandoana, tasy, tasy menaka, sns., ary koa manakana ny sira mineraly tsy ho avoaka amin'ny vato, ka miteraka voninkazo fotsy na tasy harafesina. Ny corundum fotsy no mora hita indrindra ary sarotra ny misoroka ny tasy amin'ny rano. Amin'ny toe-javatra mahazatra, ny tasy amin'ny rano dia afaka mivoaka ao anatin'ny vanim-potoana iray, fa ny tasy amin'ny rano dia mety tsy ho taraina amin'ny toetrandro mando sy orana maharitra. Rehefa tehirizina mandritra ny taona dia misy fiatraikany amin'ny corundum fotsy ireo zavatra voatondraka ireo, ary ny famonoana ny vavron'ny vato ihany no azo vahana.
Fotoana fandefasana: Apr-06-2021